Duqeyn lala beegsaday Xarun ay leedahay Idaacadda Al-Shabaab ee Andulus - Awdinle Online
Duqeyn lala beegsaday Xarun ay leedahay Idaacadda Al-Shabaab ee Andulus
Diyaarado dagaal ayaa xalay waxaa ay duqeyn culus la beegsaday Xarun idaacadda Al-Shabaab ee Andulus ku leedahay deganka Kuunya-Barroow ee gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana duqeyntaas ka dhashay khasaaro kala duwan.
Al-Shabaab ayaa Baraha ay ku leeyihiin internet-ka waxaa ay ku baahiyeen in mid kamid ah Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay Afar Gantaal ku weerartay xarunta Idaacadda Anulus ee degaanka Kuunya-barroow, isla markaana duqeyntaas ay ku waxyeeloobeen Dad shacab ah.
Sidoo kale duqeyntaas ayaa waxaa ku burburay qaar kamid ah Qalabka Idaacadda Andulus, iyada oo intii ay duqeynta socotay ay cabsi weyn dareemeen qaar kamid ah bulshada ku nool degaanka Kuunya-Baroow.
Majirto cid weli sheegatay duqeynta lala beegsaday xarunta Idaacadda Al-Shabaab ee Andulus ku leedahay degaanka Kuunya-Barrow, hayeeshe duqeymaha noocaan oo kale ah ayaa waxaa inta badan fuliya Mareykanka oo taageera siiya Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Mareykanka ayaa horay waxa uu duqeymo kala duwan uga fuliyay degaano iyo degmooytin ka tirsan koonfurta & Bartamaha dalka Soomaaliya, waxaana duqeyntaas uu sheegaa in uu ku dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, waxaana mararka qaar ku waxyeelooba dad Sxhacab ah.
Previous articleJubbaland oo war kasoo saartay xildhibaan Qarax lagu dilay
Next articleDaawo: Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo faah faahiyay sababta uu uga baaqday Shirka Garoowe